Mpandika feo amin'ny Internet - Raketo feo avy amin'ny tranokalanao
Mpandika feo amin'ny Internet
Raketo feo avy amin'ny tranokalanao
Online Voice Recorder dia ahafahanao mirakitra feo avy amin'ny mikrô mivantana amin'ny browser. Azonao atao ny manoratra feo avy amin'ny telefaona, takelaka na birao, raha toa ka manana navigateur misy azy io.
Ny raki-peo dia azo lalaovina ary hotehirizina ao amin'ny telefaona, takelaka na birao ho rakitra MP3. Ny endrika famatrarana MP3 dia manome kalitao tsara feo rehefa mitazona ny haben'ny rakitrao ho ambany.
Miaraka amin'ny fandraisam-peonay dia voaaro tanteraka ny fiainanao manokana: tsy misy angona raki-peo alefa amin'ny Internet, ny feo na ny feo noraketinao dia tsy miala amin'ny fitaovanao mihitsy. Zahao ny fizarana "Tsy misy famindrana angona" eto ambany raha te hahalala bebe kokoa.
Maimaimpoana ny fandraisam-peo nataontsika, tsy misy fisoratana anarana ilaina ary tsy misy fetra fampiasana. Azonao atao ny mampiasa azy io matetika araka izay tianao, mamorona sy mitahiry raki-peo maro araka izay itiavanao azy.
Izy io dia manana interface tsara sy mora ampiasaina ary ahitanao ny onjan'ny feo miloko mihena tsimoramora.
Ny MP3 (fantatra amin'ny anarana hoe MPEG-1 Audio Layer III na MPEG-2 Audio Layer III) dia endrika rakitra fampitahana audio. Mampiasa ny fanerena data lossy, midika izany fa esoriny ny ampahany amin'ny angon-drakitra amboariny. Ny angon-drakitra noravahan'ny MP3 compression dia mifanandrify amin'ny feo tsy henon'ny ankamaroan'ny olona. Ity karazana fampandrenesana ity dia maharesy kalitao kalitao, fa izay tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona. Ny fanerena MP3 matetika dia mahatratra eo anelanelan'ny 80% sy ny fampihenana ny haben'ny rakitra 95%.
Tsy miasa ny mikrofosinao?
Hamarino ny fitsapana mikrô mba hizaha toetra ny mikrofoninao amin'ny Internet ary hitadiavana vahaolana hanitsiana ny olan'ny mikrôona amin'ny fitaovana sy fampiharana maro samihafa.
Ampifamadiho amin'ny endrika hafa ny firaketanao MP3
MP3 Converter Online dia ahafahanao manova ny rakitra MP3 amin'ny endrika WAV, M4A, FLAC, OGG, AIFF. Maimaimpoana ary tsy misy famindrana rakitra ilaina!